olana amin'ny milina (# 3, na # 3 & 4)
fanontaniana olana amin'ny milina (# 3, na # 3 & 4)
1 taona 2 volana lasa izay #851 by PAYSON
Hi, efa ela aho no efa teto. Manana olana roa aho. Voalohany, nanova ordinatera aho. Aorian'izany, ny sasany amin'ireo fiaramanidina mahafinaritra dia maka amin'ny fotsy fotsy rehetra. Tsy misy tora-kofehy, tsy misy aty ivelany (cockpit na tsia) Tsy afaka misidina tsy misy fitaovana aho Faharoa, tsy ho vitako ny hahatongavan'ireo fitaovana ampiasaina amin'ny sehatr'asa marobe. ary 3th, asa roa fotsiny: Tena tiako ny manidina ny Dash 3, fa ny milina fotsiny sisa no mihazakazaka.
1 taona 2 volana lasa izay #852 by Dariussssss
Mila vaovao bebe kokoa isika. Inona ny fiaramanidina, izay version FSX sns ... Moa ve io fiaramanidina io dia manana ny toro-lalana, narahinao ve izany sy ny sisa ... Izany no hany fomba hanampiana.
1 taona 2 volana lasa izay #855 by PAYSON
Tahaka ny hoe very ny valinteniko teo aloha. Ataoko amin'ny alalan'ny boky sy / na hoe "vakio aho". Raha toa ka misy fiaramanidina manokana, dia nieritreritra aho fa, misy fiaramanidina manana milina 2 mihoatra. Azoko atao ny manangana ny X-56 amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny sidina, ary avy eo ny iray hafa. Ny fiovana tsirairay dia mampihetsi-po fotsiny ny motera havia na ireo fitaovana havanana mba hijanonana tsy misy idirany raha ny hafa kosa mirongatra. Mampiasa fanontam-pirinty sfx aho. Nifandray taminao aho satria nanana olana teo aloha aho ary nanampy ahy tamin'io. Miala tsiny aho amin'ny fitazonana ny fotoananao amin'ity toe-javatra ity, nieritreritra fotsiny fa nisy olona nanana olana toy izany ary nanasitrana izany. Tsy misy zavatra toy izany ao amin'ny FAQ.
Miala tsiny sy mankasitraka, PAYSON
1 taona 1 volana lasa izay #869 by PAYSON
Hiezaka any an-kafa aho. Misaotra.
1 taona 1 volana lasa izay #870 by PAYSON
Whooooa !!! Hitako ny fomba marina hametrahana ny fanitsiana amin'ny fampiasana ny motera 1 amin'ny 6. Tena tsotra izany. Misaotra ny fanampiana :-(
1 taona 1 volana lasa izay #872 by Gh0stRider203
Mizara ny olana mahazo ny hafa ve ny hafa?
1 taona 1 volana lasa izay #873 by PAYSON
Mila fanazavana bebe kokoa aho. Inona ny fiaramanidina, izay version FSX sns ... Moa ve io fiaramanidina io dia manana ny toro-lalana, narahinao ve izany sy ny sisa ... Izany no hany fomba hanampiana.OS, rafitra fanaraha-maso ny sidina, sns.
1 taona 1 volana lasa izay #874 by PAYSON
Raha ny marina dia tsy ilaina ny fampahalalana an'izany. Na iza na iza mampiasa X-55 na X-56 rafitra Control System Saitek Advanced ary mahatsapa ny fahafaha-maotera 1 & 2 voafetra, hitako ny heveriko fa ilay fanasitranana. Efa navoakako aloha ity, saingy mila fotoana vitsivitsy hamerenana io fefy 20 fixa io mba hanaporofoana ahy izany. Mety io. Sokafy tsotra fotsiny ny "sehatra", ary asio fampitahana. Esory daholo ny fanovana rehetra, rehefa tsy misy intsony ny fantson-drivotra, ary eo amin'ny toerany tsy misy ilana azy ny tavoahangy (azafady ny mamela ny sola voasambotra any amin'ny toerana voalohany), alao ny tavoahangy mankany amin'ny malalaka malalaka, miverimberina ao ambadik'izay ho an'ny misokatra malalaka, dia miverena any amin'ny idle, manoritsoritra toy ny mahazatra, mifarana ny fanovana, mandehana any amin'ny fiaramanidina maoderina 4 ary manandrama azy. Manantena aho fa miasa ho anao ez toy ny nataony ho ahy.
1 taona 1 volana lasa izay #875 by PAYSON
Oay, misy vondron'olona vaky sambo WWII miseho ary mihitsoka any amin'ny morontsirak'i Aostralia (YBBN).
Fotoana mamorona pejy: 0.322 segondra